The Secret Life of Walter Mitty (2013) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Ben Stiller, David H. Venghaus Jr., Peter Thorell, Phil Neilson, Thomas Johnston
Adam Scott, Adrian Martinez, Ben Stiller, Gunnar Helgason, Kathryn Hahn, Kristen Wiig, Ólafur Darri Ólafsson, Patton Oswalt, Sean Penn, Shirley MacLaine
အမှနျအတိုငျးပွောရရငျ ဒီဇာတျကားကို အစပိုငျး မိနဈ(၂၀)လောကျအထိ သူ ဘာကိုပွခငျြမှနျး နားမလညျခဲ့ဘူး။ ဒီအတိုငျး ပေါကွောငျကွောငျ ဇာတျကားကွီးပါလားလို့ ထငျခဲ့မိတယျ။
ဒီဇာတျကားဟာ 1939 ခုနှဈက အရမျးကို နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ ဟာသ/ကာတှနျး/စာရေးဆရာကွီး James Thurber ရဲ့ ဝတ်ထုတို The Secret Life of Walter Mitty ကို ပွနျလညျရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး 1947 ခုနှဈမှာ တဈကွိမျ The Secret Life of Walter Mitty နာမညျနဲ့ပဲ ရုပျရှငျရိုကျကူးထားပါသေးတယျ။
အစောပိုငျးမှာ ကွညျ့ရတာတဈမြိုးကွီးဖွဈနပေမေယျ့ အဆုံးထိ ဆကျကွညျ့ဖွဈခဲ့ပွီး..
ကွညျ့ရကြိုးနပျရုံမက မကွညျ့ရသေးတဲ့ သူတှကေိုပါ ကွညျ့ဖို့ညှနျးခငျြလောကျအောငျပဲ ကွိုကျသှားခဲ့ပါတယျ။
လူတျောတျောမြားမြားပါပဲ.. (ကြှနျတျောအပါအဝငျ) သမားရိုးကြ နစေ့ဉျဘဝကို ကငျြလညျနကွေပါတယျ။ ပညာသငျမယျ .. ပိုကျဆံရှာမယျ.. ဘဝကို ပုံမှနျပဲ ကွိုးစားရုနျးကနျတညျဆောကျမယျပေါ့။
ငယျစဉျက စိတျကူးယဉျအိမျမကျတှေ.. စှနျ့စားခငျြစိတျတှကေ ..အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ.. စိတျကူးထဲမှာပဲ တဖွေးဖွေးတိမျမွုပျသှားကွတယျ။
တဈခါတဈလမှောတော့ ရုပျရှငျတှထေဲမှာ ဆကျလကျစိတျကူးယဉျကွတယျ။ တဈခါတဈလမှောတော့ ရုပျရှငျထဲကအတိုငျး အပွငျမှာ ဆကျပွီးစိတျကူးယဉျကွတယျ။
ဒီလိုနဲ့ အသကျတှတေဖွညျးဖွညျးကွီး သက်ကရာဇျတှကေ တိုကျစားရငျး လူတှေ လုံးပါး ပါးလာကွာတာပဲ မဟုတျပါလား..
Walter Mitty ဆိုတဲ့ လူကလညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပါပဲ…
အသကျကွီးနတေဲ့ အမအေိုတဈဦးရယျ ညီမတဈယောကျရယျနဲ့ ပုံမှနျအလုပျသှားအလုပျပွနျရငျး ..အခြိနျတှကေုနျလာလိုကျတာ အသကျ(၄၁)နှဈကိုရောကျလာရော…
သူက Life မဂ်ဂဇငျးရဲ့ ဓာတျပုံဌာနက နဂ်ဂတဈဖလငျတှစေုဆောငျးထားတဲ့ ဌာနရဲ့ မနျနဂြောတဈဦး..
သူ့ဌာနမှတဆငျ့ နဂ်ဂတဈဖလငျတှကေနေ ဓာတျပုံအဆငျ့ကိုဖွတျသနျးပွီးမှ မဂ်ဂဇငျးအတှကျအသုံးပွုရတာပါ။
သူစိတျဝငျစားနတေဲ့ အမြိုးသမီးကလညျး သူတို့ Life မဂ်ဂဇငျးမှာ လှနျခဲ့တဲ့ (၁)လ လောကျကမှ ရောကျလာတဲ့ ဝနျထမျးတဈဦး ၊ အသကျ(၄၀)ကြျောလာတဲ့အထိ ဖခငျကှယျလှနျပွီး (သူဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက) မိသားစုအတှကျ အဈကိုကွီးအဖရာ အနနေဲ့ ဘဝတဈလြှောကျလုံးကွိုးစားရုနျးကနျလာခဲ့ပွီး ငှကွေေးကိုစနဈတကသြုံးစှဲက မခမျြးသာပမေယျ့ ပုံမှနျလညျပတျနတေဲ့ လခစားဝနျထမျးတဈယောကျအနနေဲ့ ရိုးသားအေးဆေးစှာနလောခဲ့တဲ့သူ…
မှေးနမှေ့ာ ကံကောငျးခွငျးတှထေကျ ကံဆိုးဖို့တှသောဖွဈလာခဲ့တာကတော့…
သူတို့ မဂ်ဂဇငျးက ဒီလအတှကျ နောကျဆုံးထုတျဝခွေငျးပါတဲ့ … ဝနျထမျးတှလေညျး ရုတျတရကျ ဆှံ့အသှားခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဘာမြားတတျနိုငျဦးမှာလဲ…
နောကျထပျ တကယျ့ လတျတလောပွသနာကတော့ …သူ့ဌာနကို ရောကျလာတဲ့ တဈကိုယျတျော စှနျ့စားသှားလာ ဓာတျပုံရိုကျကူးနတေဲ့ Sean O’ Connell က ပို့လိုကျတဲ့ နဂ်ဂတဈဖလငျ (၂၅)ကှကျနဲ့ သူ့အတှကျ မှေးနလေ့ကျဆောငျ ပိုကျဆံအိတျကလေးပါ။ ဖလငျ (၂၅)ကှကျမှာ (၂၅)ကှကျမွောကျ ဖလငျက ပါမလာပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ အထကျလူကွီးဆီကို ရောကျနတေဲ့ သတငျးကတော့ ဒီတဈပတျနောကျဆုံးထုတျမဂ်ဂဇငျးရဲ့ အဖုံးကို ဖလငျနံပါတျ(၂၅) ကို အသုံးပွုဖို့ Sean O’ Connell က မှာလိုကျပါသတဲ့….
အဲဒီတော့ Sean O’ Connell ကိုအရေးတကွီး ဆကျသှယျမေးမွနျးဖို့ လိုအပျလာပါပွီ.. ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီတဈကိုယျတျောဓာတျပုံဆရာ လူစှနျ့စားကွီးက Mobile Phone / Email / internet social media account ဘာတဈခုမှ မသုံးပါဘူး။
(၂၅)ကှကျမွောကျ ဖလငျကို ရရှိဖို့ကလညျး Walter Mitty အတှကျ သရေေးရှငျရေးတမြှအရေးကွီးပါတယျ။
ဒီတော့ ဘယျလို ဆကျလုပျကွမလဲဗြ ???
Zoolander (2001) မငျးသားကွီး Ben Stiller ကိုယျတိုငျ ရိုကျကူးသရုပျဆောငျထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈပွီး IMDb 7.3/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ဘဝ နတေ့ဓူဝ ရုနျးကနျနထေိုငျခွငျးရဲ့ အဓိပ်ပာယျတှေ.. ရုပျဝတ်ထုတှရေဲ့ အရေးပါပုံတှေ… အလှတရားတှေ .. သဘာဝအလှ/ရုပျအလှ ပွီးတော့ စိတျဓာတျခှနျအားရဲ့ ကွီးကယျြခနျးနားတဲ့ အလှ တှကေို ပွနျလညျသုံးသပျမိစအေောငျ လှုံ့ဆျောပေးပါလိမျ့မယျ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီဇာတ်ကားကို အစပိုင်း မိနစ်(၂၀)လောက်အထိ သူ ဘာကိုပြချင်မှန်း နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒီအတိုင်း ပေါကြောင်ကြောင် ဇာတ်ကားကြီးပါလားလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ 1939 ခုနှစ်က အရမ်းကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဟာသ/ကာတွန်း/စာရေးဆရာကြီး James Thurber ရဲ့ ဝတ္ထုတို The Secret Life of Walter Mitty ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး 1947 ခုနှစ်မှာ တစ်ကြိမ် The Secret Life of Walter Mitty နာမည်နဲ့ပဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားပါသေးတယ်။
အစောပိုင်းမှာ ကြည့်ရတာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေပေမယ့် အဆုံးထိ ဆက်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပြီး..
ကြည့်ရကျိုးနပ်ရုံမက မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေကိုပါ ကြည့်ဖို့ညွှန်းချင်လောက်အောင်ပဲ ကြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
လူတော်တော်များများပါပဲ.. (ကျွန်တော်အပါအဝင်) သမားရိုးကျ နေ့စဉ်ဘဝကို ကျင်လည်နေကြပါတယ်။ ပညာသင်မယ် .. ပိုက်ဆံရှာမယ်.. ဘဝကို ပုံမှန်ပဲ ကြိုးစားရုန်းကန်တည်ဆောက်မယ်ပေါ့။
ငယ်စဉ်က စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ.. စွန့်စားချင်စိတ်တွေက ..အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ.. စိတ်ကူးထဲမှာပဲ တဖြေးဖြေးတိမ်မြုပ်သွားကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဆက်လက်စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း အပြင်မှာ ဆက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အသက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီး သက္ကရာဇ်တွေက တိုက်စားရင်း လူတွေ လုံးပါး ပါးလာကြာတာပဲ မဟုတ်ပါလား..
Walter Mitty ဆိုတဲ့ လူကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ…
အသက်ကြီးနေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရယ် ညီမတစ်ယောက်ရယ်နဲ့ ပုံမှန်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ရင်း ..အချိန်တွေကုန်လာလိုက်တာ အသက်(၄၁)နှစ်ကိုရောက်လာရော…
သူက Life မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံဌာနက နဂ္ဂတစ်ဖလင်တွေစုဆောင်းထားတဲ့ ဌာနရဲ့ မန်နေဂျာတစ်ဦး..
သူ့ဌာနမှတဆင့် နဂ္ဂတစ်ဖလင်တွေကနေ ဓာတ်ပုံအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းပြီးမှ မဂ္ဂဇင်းအတွက်အသုံးပြုရတာပါ။
သူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အမျိုးသမီးကလည်း သူတို့ Life မဂ္ဂဇင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁)လ လောက်ကမှ ရောက်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ၊ အသက်(၄၀)ကျော်လာတဲ့အထိ ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီး (သူဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက) မိသားစုအတွက် အစ်ကိုကြီးအဖရာ အနေနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြိုးစားရုန်းကန်လာခဲ့ပြီး ငွေကြေးကိုစနစ်တကျသုံးစွဲက မချမ်းသာပေမယ့် ပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့ လခစားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုးသားအေးဆေးစွာနေလာခဲ့တဲ့သူ…
မွေးနေ့မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေထက် ကံဆိုးဖို့တွေသာဖြစ်လာခဲ့တာကတော့…
သူတို့ မဂ္ဂဇင်းက ဒီလအတွက် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခြင်းပါတဲ့ … ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရုတ်တရက် ဆွံ့အသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဘာများတတ်နိုင်ဦးမှာလဲ…
နောက်ထပ် တကယ့် လတ်တလောပြသနာကတော့ …သူ့ဌာနကို ရောက်လာတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စွန့်စားသွားလာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနေတဲ့ Sean O’ Connell က ပို့လိုက်တဲ့ နဂ္ဂတစ်ဖလင် (၂၅)ကွက်နဲ့ သူ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးပါ။ ဖလင် (၂၅)ကွက်မှာ (၂၅)ကွက်မြောက် ဖလင်က ပါမလာပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အထက်လူကြီးဆီကို ရောက်နေတဲ့ သတင်းကတော့ ဒီတစ်ပတ်နောက်ဆုံးထုတ်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အဖုံးကို ဖလင်နံပါတ်(၂၅) ကို အသုံးပြုဖို့ Sean O’ Connell က မှာလိုက်ပါသတဲ့….
အဲဒီတော့ Sean O’ Connell ကိုအရေးတကြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတစ်ကိုယ်တော်ဓာတ်ပုံဆရာ လူစွန့်စားကြီးက Mobile Phone / Email / internet social media account ဘာတစ်ခုမှ မသုံးပါဘူး။
(၂၅)ကွက်မြောက် ဖလင်ကို ရရှိဖို့ကလည်း Walter Mitty အတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမလဲဗျ ???
Zoolander (2001) မင်းသားကြီး Ben Stiller ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb 7.3/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘဝ နေ့တဓူဝ ရုန်းကန်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ.. ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ အရေးပါပုံတွေ… အလှတရားတွေ .. သဘာဝအလှ/ရုပ်အလှ ပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ အလှ တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မိစေအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Ben Stiller David H. Venghaus Jr. Peter Thorell Phil Neilson Thomas Johnston
Adam Scott Adrian Martinez Ben Stiller Gunnar Helgason Kathryn Hahn Kristen Wiig Ólafur Darri Ólafsson Patton Oswalt Sean Penn Shirley MacLaine
Adam Scott Adrian Martinez Alex Anfanger Alex Kruz Amanda Naughton Amy Stiller Andres Quezada Andy Richter Ang Babu Sherpa Ang Gelu Sherpa Anna Kuchma Anthony Desio Antonio Molina Ari Matthíasson Asta Paredes Barbara Vincent Ben Stiller Bennie Road Birgir Jarl Runarsson Brady Bryson Brian Gildea Brian Scott McFadden Chloe Elaine Scharf Christopher Watts Conan O'Brien Craig 'Radioman' Castaldo Daniel Orellana Dawa Sherpa Dennis Lauricella Dennis Rees Dion Graham Efraiem Hanna Ehsan Nawroz Eysteinn Gardarsson Eythor Atli Hilmarsson Finni Johannsson Gary Ferster Gary Wilmes George Aloi Grace Rex Greg Cipes Gunnar Helgason Gurdeep Singh Hal Panchansky Haroon Nawabi Hendrikus Schraven Hynden Walch Ilan Krigsfeld Jay Ferraro Jennifer Leigh Mann Jenny Rostain Jerome Brooks Jr. Joe Vargas Joey Slotnick Jon Daly José Alcántara Joshua Schubart Kai Lennox Kathryn Hahn Kathryn Shasha Kelsey Wang Kristen Wiig Leeann Hellijas Lil Rhee Liz Mikel Losang Thonden Lucinda Lewis Lynne Valley Maariu Olsen Makka Kleist Marco Torriani Marcus Antturi Marmee Regine Cosico Martin Lagos Matt Levin Matthew Gooley Miguel Baez-Olavarria Mohammed Arif Baser Mohammed Pancherri Ngima T. Sherpa Nicole Neuman Nolan Carley Nuri Chhiri Sherpa Ólafur Darri Ólafsson Patton Oswalt Paul Bosche Paul Fitzgerald Peter Riga Philip Odango Phurba Tashi Sherpa Raymond Mamrak Richard DeDomenico Rinjee Sherpa Rob Tode Rodrigo Espinosa Roger Brenner Rosamund Gundmundsdottir Rosemary Howard Roy Pollack Ryan McBride Ryan Nicolls Saima Huq Samantha Gelnaw Sean Penn Seba Alón Shade Rupe Shirley MacLaine Sonam Sherpa Stefan B. Onundarson Stephen Sapienza Steve Assil Stuart Cornfeld Tara Strong Terence Bernie Hines Toshiko Onizawa Valur Snaer Hilmarsson Walter Mudu Wes Pope William Henderson White Þórhallur Sigurðsson
Option 1 onedrive.live.com 540 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 540 MB SD (480p)